Ezempilo, Ukuphepha Nezemvelo - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Ukuziphatha kwebhizinisi elibhekelekayo nokukhula komnotho okusimeme bekuyingxenye ye-DNA selokhu kwatholakala iXY Tower.
Namuhla ukuthuthuka okusimeme nezomnotho kuyizimiso zethu eziyingxenye ebalulekile yomsebenzi wethu kanye nokusebenza kwethu futhi kwenziwa ngokusemthethweni ngomsebenzi wethu ohlelekile. Sikholelwa ukuthi ibhalansi efanele ingafinyelelwa futhi kufanele itholakale phakathi kokuthuthukiswa komnotho nezinhloso zemvelo. Izinhloso nezinjongo zemvelo zibekelwe amabhizinisi ethu ahlolwa abaphathi abajwayelekile kanye nezinyathelo zokuphatha kanye nokuqashwa okuzimele kwangaphakathi nokwangaphandle. I-XY Tower ikholelwa futhi ikhuthaza ukuthi bonke abasebenzi bethu banesibopho sokulandela imigomo yezinhloso zemvelo, izinhloso nezidingo zokuphatha. Sizinikela ekubeni ngumholi ekuphathweni kwe-HSE okufanele ezinkampanini zontanga.
I-XY Tower izinikele emcabangweni wokuthi zonke izingozi ziyavikeleka futhi sizibophezele emgomeni wezingozi ezingekho nhlobo. Ukufeza lokhu kuzibophezela kanye nokukhuthaza isiko lokuthuthuka okuqhubekayo kwemisebenzi yethu yezempilo nokuphepha, imfuneko elandelayo izolandelwa:
Ukuzigcina sazi futhi sihambisana nayo yonke imithetho nemithethonqubo yamanje neyesikhathi esizayo.
Faka izindinganiso nezinqubo ezinzima kunkampani yethu.
Impilo yabasebenzi yinto ebhekwe phambili yinkampani. I-XY Tower iqinisekisa ukuphepha ezindaweni zokusebenza futhi bonke abasebenzi kufanele babe semishini Yokuzivikela e-workshop, kuyilapho umsebenzi kufanele alandele ikhodi yokukhiqiza yezokuphepha ngokuphelele.
Vikela Ezemvelo ngokugcina amazinga aphansi kadoti owenziwe ngemisebenzi eyahlukahlukene, futhi unciphise ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza.
Qhubeka ukhombe izindawo ezingaba khona zokwenza ngcono uHlelo Lokuphatha lwe-HSE bese usungula izinyathelo ezidingekayo zokuqalisa lokho kuthuthukiswa.